ကောင်းလွန်းသော – Grab Love Story
. ကျွန်တော်ရော အခန်းထဲမှ မမရော လန့် သွားသည်. သွားပြီ တချိန်တည်း မမသန့် လှန်ထားသော ထမိန်ကိုအမြန်ချပြီး အခန်းပြင်သို့ ထွက်လာရာ အားနာကြောက်ရွံ့ စွာ မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသွားသည်. ထိတ်လန့် စွာ ခေါင်းငုံ့ ထားသော ကျွန်တော့်ေ့ ရှသို့ မမရောက်ရှိလာပြီ. အားနာမိသော အကြည့်များဖြင့် ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေစဉ် တည်ကြည်သောမျက်နှာထားဖြင့် ‘မင်း ဘယ်တုန်းက ရောက်နေတာလဲ, ဘာမြင်ထားလဲ အမှန်အတိုင်းပြောပါ’ ဆိုသော စကားလုံးများပြောလာသည်. တိတ်ဆိတ်နေသော ကျွန်တော့်အတွက် အမှန်ကိုပြောမထွက်နိုင်. ‘မေးနေတယ်လေ မောင်လေး’ လို့ ပြောလာပြန်သည်. ‘ဟုတ် အစ်မ’ ကျွန်တော်ပြောသောအခါ ‘ဟုတ်ပါပြီ မမြင်သလိုပဲ ထားလိုက်တော့ မောင်လေး အမခွင့်လွှတ်ပါတယ်’ ကျွန်တော်လည်း ‘ဟုတ်အမကို ကျေးဇူးပါပဲ’ လို့ ပြောပြီး နောက်ဖေးအိမ်သာ ဆီသို့ သွားခဲ့သည်. မြင်ခဲ့မိသော မမသန့်ရဲ့ လက်နဲ့ အင်္ဂါ ကလိနေပုံကို စိတ်ထဲမှန်းပြီး ကိုယ့် ပစ္စည်းကို သုတ်ထွက်သွားအောင် လက်ဆော့ပြစ်လိုက်သည်. စိတ်ကူးလည်းယဉ်, ထွက်လည်းမထွက်ရဲတာကြောင့် တော်တော်ကြာသွားသည် အိမ်သာတံခါးခေါက်သံကြောင့် ‘ ခင်ဗျာ မမ’ ဟုထူးလိုက်သောအခါ ‘မောင်လေး ကော်ဖီသောက်ရအောင်’ ပြောသွားသည်. မျက်နှာပူစွာဖြင့် ဧည့်ခန်းထိုင်ခုံထိုင်ပြီး ကော်ဖီပူတစ်ခွက်ကို ခေါင်းငုံ့ ကာသောက်လိုက်သည်. ကော်ဖီတစ်ဝက်လောက်အကုန်တွင် ခေါင်းဆက်ခနဲ အမော့လိုက်တွင် ‘မောင်လေး လျှာတွေပူနေအုံးမယ် ဖြေးဖြေးသောက်ပါ’ ‘ဟုတ်ကဲ့ မမ အားနာနေလို့ပါ တောင်းပန်ပါတယ်နော်’ ‘ရပါတယ် မောင်လေးရယ်မလိုပါဘူး တိုက်ဆိုင်သွားတာပါ’ ဟု အပြုံးမျက်နှာဖြင့် မမသန့်ပြန်ပြောလာသည်. ‘ခွင့်လွှတ်တယ်ပေါ့ နော် မမ နောက်နေ့မုန့်ပို့ရင် အိမ်ကအလုပ်သမားတစ်ယောက်ကို လွှတ်လိုက်မယ်နော်’ ‘မောင်လေးရယ် အဲလောက်ကြီး မလိုပါဘူး ပုံမှန်ပဲ အိမ်ကို ဝင်ထွက်သွားလာပါ မမက အအိုတစ်ခုလပ်ပါ ဒါမျိုးတွေကဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူး ။
‘ မမ ရဲ့ အသက်အရွယ် ခန္ဒာကိုယ်က မောင်လေး ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး ရှိသေးလားဟင်’ စိတ်ထဲရှုတ်ထွေးနေသော ကျွန်တော်သည် ဘာပြောရမှန်းမသိပဲ ညိမ်နေမိသည်. ခဏလောက်ကြာသွားတော့‘မောင်လေး မဖြေနှိင်ဘူးလား အမ သိချင်လို့ပါ မကြိုက်ရင်လည်း ရပါတယ် မောင်လေး ငြင်းရမှာ အားမနာပါနဲ့ အမ သဘောပေါက်ပါပြီ တောင်းပန်တယ်နော် မောင်လေး ကော်ဖီ ဆက်သောက်သွားပါအုံးနော်’ ကျွန်တော် ငြိမ်သက်စွာ စဉ်းစားနေသည်. မမရဲ့ လက်နဲ့ ကလိနေပုံ ဟိုအရင်က ဒီအိမ်ရောက်တိုင်း အမြဲကြည့်မိဖူးတဲ့ မမနောက်ကျော လှပမှု တွေးရင်း ကာမစိတ်တွေပြင်းထန်လာသည်. ကော်ဖီလက်ကျန်ကို အမြန်မော့်ပြီး ‘ မမကို ကြိုက်ပါတယ်’ လို့ အားတင်းကာ ပြန်ပြောလိုက်သည်. အံ့ အောသွားသော မျက်နှာဖြင့် ‘တကယ်လား ဟုတ်လို့လား မောင်လေး’ ‘ဟုတ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ငရဲကြီးမှာ ကြောက်တယ်’ ‘အယ် မောင်လေးကလည်း မမ ကအခု လွတ်လပ်သူ ဖြစ်နေပါပြီ မမ ကြည်ဖြူပါတယ် တောင့်တနေရတာ ကြာခဲ့ပါပြီ’ ကျွန်တော် ဦးနှောက်အသိ နဲ့ ကာမစိတ်တို့ လွန်ဆွဲနေရင်း ‘ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ကိုသွားကြမလဲဟင် မမ’ လို့ မေးလိုက်မိသည်. ‘ ဘယ်မှ သွားစရာမလိုဘူး အိမ်မှာ ဘယ်သူမှမရှိတာ အခန်းထဲကို သွားကြမယ်လေ မောင်လေး’ ‘ ဟုတ် မမ’ လို့ ပြောရင်း မမနောက်ကနေ လိုက်သွားသည်. အခန်းထဲ အရောက်တွင် ကုတင်ပေါ်တွင် ထိုင်နေသော မမ ၏ ရှေတွင် ဘယ်ကစရမှန်းမသိပဲ မတ်တတ်ရပ်နေမိသည်. ‘ မောင်လေး စိတ်ကိုလျှော့ထားနော် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲ ဥုစ္စာ ‘ လို့ ပြောရင်း ကျွန်တော် ဝတ်ထားသော ပုဆိုးကို အကုန်ချွတ်ချလိုက်သည်. ကျွန်တော်၏ လီးကို မမ လက်နဲ့ဖြေးဖြေးကိုင်ရင်း ‘မောင်လေး အမွှေးတွေ ရိပ်ထားတာလား ပြောင်နေတာပဲ မမလည်း အမွှေးရှည်ရင် မနေတတ်ဘူး မနက်ကမှ ရိပ်ထားတာ ပြောင်နေတာပဲ လာကတင်ပေါ် အိပ်လိုက်’ ဟု ဆိုကာ ကျွန်တော့် လက်ကျန်အင်္ကျီကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။
မမလည်း မတ်တပ်ရပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှ အဝတ်များကို အကုန်ဖယ်လိုက်ပြီး ‘မောင်လေး မမ အလှတွေ ကျန်သေးလားဟင်’ ‘မမကလှပြီးသားပါ ဒီရောက်တိုင်း မမနောက်ကနေ အမြဲကြည့်တယ် ပြီးရင် စိတ်ကူးယဉ်တယ်’ ‘ဟုတ်လား ကဲ ဒါဆို ခုလက်တွေ့ စလိုက်ကြစို့’ ဟုပြောကာ ညင်သာသောလက်ကလေးများဖြင့် လီး ကိုပွတ်သပ်ပေးနေသည်. စောစောကမှ ဂွင်းတိုက်ထားသော လီး မှာ အရည်တွေ ရွှဲနေပေမယ့် မတောင်နိုင်သေးပါ. ကျွန်တော်လည်း မျက်လုံးမှိတ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်ကာ အမြဲငေးကြည့်ခဲ့ရသော မမ ရဲ့ ဖင်ကြီးတပြင်လုံးကို ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည်. နွေးသော ခံစားချက်ကို ကျွန်တော့်လီး၏ ထိပ်တွင် ခံစားမိသောအခါ မျက်လုံးဖွင့်ပြီး ရုတ်ခနဲ လီး ဆီကိုကြည့်လိုက်တော့ လီးကိုဖြေးညှင်းစွာ စုပ်နေသော မမ ကို တွေ့လိုက်ရသည်. ဘာပြောရမှန်း မသိဖြစ်နေစဉ် ‘ မောင်လေး ပါးစပ်နဲ့ လုပ်ပေးတာ ကောင်းလားဟင်’ ကျွန်တော် ခေါင်းညိပ့်လိုက်သည်. ဖြေးဖြေးမြန်လာသော မမ ၏ စုပ်ပေးမှုကြောင့် လီးမှာ တင်းမာလာနေသည်. ကျွန်တော်လည်း မမ ကို ကောင်းအောင်လက်နဲ့ မမရဲ့ စောက်ပတ် ကို အောကားတွေထဲကလို ကလိပေးနေလိုက်သည်. ဒီလိုနဲ့ နာရီဝက်လောက် ကြာသွားတော့ ‘မောင်လေး လုပ်လို့ရပြီလား ပါးစပ်နဲ့ လုပ်ပေးတာ ကောင်းလားဟင်’ ‘ ဟုတ် မမ ကျွန်တော် ဘယ်လိုကြီးမှန်းကို မသိတော့ဘူး’ ‘ဟုတ်ပါပြီ ဒါဆို မမ အပေါ်ကတက်လုပ်တော့မယ်နော်’ ‘ဟုတ် မမ’ဟု ပြန်ပြောလိုက်သည်. ကျွန်တော့် အပေါ်တွင် ခွလျှက် ရောက်နေသော မမသည် လီး ကိုလက်နဲ့ကိုင်ကာ စောက်ဖုတ် အဝသို့တေ့ပြီး ဖြေးညှင်းစွာ ကျွန်တော့်၏ လီး ဆုံးသွားသည် အထိ ဖိချ လိုက်ကာ ခဏတာ ငြိမ်နေသည်. ကျွန်တော် မြင်နေရသော မမသည် အင်မတန်လိုချင် လိုအပ်နေသော အရသာတစ်ခုကို စတင်မည်းစမ်းလိုက်ရသော ခံစားချက်မျိုး မမမျက်နှာတွင် တွေ့နေရသည်. ‘မောင်လေး အဆင်ပြေရဲ့လား’ လို့ မမမေးတဲ့ အသံမှာ ဖီးအပြည့်နဲ့ပေါ့. ‘ ဟုတ်ကောင်းပါတယ် မမ ကောင်းအောင် ကြိုက်သလိုလုပ်ပါ အဆင်ပြေပါတယ်’ ဟု ကျွန်တော်ပြောပြီးနောက် ခက်သွက်သွက် မနားတမ်း ဆောင့်တော့သည်။
မမနာရင် ပြောနော်’ . ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ဖြင့် ကျွန်တော် လီးကြီးသည် ဘဝ၏ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖင်လိုးဖူးခြင်းကို စတင်ခံစားရသည်. ဖင်ပေါက်တလျှောက်လုံး၏ တင်းကြပ်ဆုပ်ယူခြင်း ခံထားရသော ကျွန်တော့်၏ လီး တစ်ပတ်လုံးမှာ အရေပြားချင်းထိတွေ့မှုရဲ့ အရသာဟာ ထူးကဲလှသည်. ကောင်းလွန်းသောဖီး များ ခံစားမိနေသော ကျွန်တော်ကို မမ မေးလာသည်. ‘ ဘယ်လိုနေလဲ မောင်လေး , အဆင်ပြေရဲ့လား , မမ ကတော့ မနာဘူး’ ‘ ဟုတ် မမ အဲဒါဆို သွက်သွက်လေး လုပ်ကြည့်မယ်နော်’ ဟု ပြောကာ မိနစ်(၂၀)လောက် မနားတမ်းအားအင် အပြည့်နှင့် လုပ်နေသည်. ‘ အား…အား…, မောင်လေး ‘လို့ ညည်းသံကိုကြားလို့ မမမျက်နှာကို ကြည့်မိလိုက်တော့ သူ့နှုတ်ခမ်းကိုသူ ကျိပ်ကိုက်ပြီး ခပ်မဲ့မဲ့ဖြစ်နေသော မမ မျက်နှာကို မြင်မိသည်. ဆောင့်လုပ်ခြင်းကို ကျွန်တော် ရပ်လိုက်ပြီး ‘ မမ နာနေလို့လား ရရဲ့လားဟင် ‘ ‘မောင်လေး ရော ဘယ်လိုလဲ ကောင်းရဲ့လာ’ လို့ ပြောကာ ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်က ချွေးတွေကို သူ့လက်နဲ့ သုတ်ပေးနေသည်. ‘ကောင်းတာပေါ့ မမရဲ့ ကျွန်တော် ပြီးတောင်ပြီးချင်နေပြီ အမိုက်ဆုံး ဖီးပဲ’ ‘ ကဲ ဒါဆို မောင်လေးပြီးအောင် လုပ်တော့, ပုံစံပြောင်းအုံးမလား’ ‘ ဒီအတိုင်းပဲ ကောင်းပါတယ် , မမ နို့တွေကို လုပ်ရင်းနဲ့ စို့အုံးမှာ’ လို့ပြောရင်း ဖင်ထဲ အဆုံးထိ ထည့်ထားသော လီးကြီးကို စတင်ကစားလိုက်တော့သည်. မမ နို့တွေကို ကုန်းစို့ရင်း လုပ်နေသည်မှာ (၂၅)မိနစ်ခန့် ကြာသွားသော အခါ ပြီးချင်လာသော အင်မတန်ကောင်းသည့်အရသာကို ခစားလာရသည်. ‘မမ ကျွန်တော် ပြီးချင်လာပြီ , ပြီးလိုက်တော့မယ်နော်’ ‘ရတယ် မောင်လေး ကောင်းရင် ပြီးရော’ ‘ဟုတ် မမ ကျွန်တော် နဲနဲမြန်မြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်’ မမခေါင်းညိမ့်ပြသည်နှင့် တပြိုင်နက် အပေါ်ထောင်ထားသော မမပေါင်တံကို ဆွဲဆွဲပြီးခပ်မြန်မြန် လုပ်ပြစ်လိုက်သည်. မမ၏ ညည်းသံနှင့်အတူ ကျွန်တော်၏ ဖီးတက်လာပြီး မမရဲ့ ဖင်ပေါက်ထဲကို သုတ်ပိုးများပန်းထွက်သွားကာ နှစ်ဦးသားလုံး ပွေ့ဖက်ကာ ညိမ်သက်နေမိသည်. အဝတ်တွေဝတ်ပြီး ပြန်ကာနီးတွင် ညကျရင်ဖုန်းဆက်မယ်လို့ ပြောခဲ့ပြီး ပြန်လာခဲ့တော့သည်…..ပြီးပါပြီ ။
တုန် တုန် နေ တာ ပဲ